Cây mít: đặc điểm, cách trồng, kỹ thuật ghép, chăm sóc sai quả | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Cây mít: đặc điểm, cách trồng, kỹ thuật ghép, chăm sóc sai quả | Hatgiongtihon.net
Đang Đọc: Cây mít: đặc điểm, cách trồng, kỹ thuật ghép, chăm sóc sai quả | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Umthi weJackfruit ngumthi weziqhamo okhule kakhulu kwilizwe lethu. Abantu bahlala belima lo mthi ukuze batye iziqhamo, njengento yokuhombisa kwiigadi, ezintabeni okanye kwivaranda. Ivumba lejackfruit liqhelekile, livakala egadini ngexesha lonyaka lejackfruit evuthiweyo. Yiyo loo nto esi sityalo sithandwa kakhulu namhlanje. Makhe sibhekiselele kwinqaku elilandelayo ukuze siqonde ngcono iimpawu, ukutyala, ubuchule bokuxhunyelelwa, kunye nokukhathalela ijackfruit.
1 Zeziphi iimpawu zemithi yejackfruit?
2 Ngaba imithi yejackfruit kufuneka ityalwe phambi kwendlu?
3 Ukuhlelwa kwemithi yejackfruit
3.1 Umthi wejackfruit waseThai
3.3 Ihlathi jackfruit
3.4 Umthi wejackfruit oyindoda
3.5 Umthi wejackfruit obomvu
3.6 Super early Thai jackfruit
3.7 umthi wejackfruit
4 Ungatyala njani umthi wejackfruit ongalunganga
4.1 Indlela yokukhulisa ijackfruit ngezithole
4.2 Ukutyala imithi yejackfruit ezimbizeni
5 Ubuchwephesha bokufakelwa komthi wejackfruit
6 Indlela yokunyamekela umthi wejackfruit
6.1 Ukunyamekela imithi ye-jackfruit ngaphandle kwezifo
6.2 Ukukhathalela amagqabi ejackfruit atyheli
6.3 Ukunyamekela imithi yejackfruit engavelisi siqhamo
7 Uwubetha njani umthi wejackfruit
8 Ixabiso lezithole zejackfruit
Zeziphi iimpawu zemithi yejackfruit?
Umfanekiso womthi wejackfruit
IJackfruit sisityalo esinomthi, esihlala sihlala sinobude obuphakathi kwe-8 ukuya kwi-20 yeemitha. Esi sityalo sineengcambu ezomeleleyo, ezendele nzulu emhlabeni. Amagqabi omthi wejackfruit amile okweqanda, alula, angqindilili kwaye alinganayo. Iintyatyambo zeJackfruit zineentyatyambo ezizinkunzi nezizimazi, azidlelani ngokwesini kwaye zikhula kwiindiza ezimfutshane zesityalo. Ezi ziimpawu ezichaza imithi yejackfruit ezikunceda ukuba uhlukanise kweminye imithi.
Ihlala phi imithi yejackfruit? Esi sityalo sinokukhula kwaye sikhule nakwezona meko zinzima. Zingakhuliswa kwiigadi, emahlathini, kwiinduli, njl. yonke indawo kwihlabathi, kubandakanywa nelizwe lethu.
Ngaba imithi yejackfruit kufuneka ityalwe phambi kwendlu?
Ngaba imithi yejackfruit kufuneka ityalwe phambi kwendlu? Ngumbuzo abantu abaninzi abawubuzayo. IJackfruit ifanekisela amandla, angenakoyiswa phambi kwezaqhwithi zobomi. Ukongezelela, lo mthi unentsingiselo ye-feng shui ebonisa ukuchuma kunye nenhlanhla, ngoko xa utyala i-jackfruit phambi kwendlu, iya kuzisa umninimali kunye nokuqhubela phambili komsebenzi.
Ukuhlelwa kwemithi yejackfruit
Umthi wejackfruit waseThai
Ijackfruit yaseThai yenye yeendidi zejackfruit ezithandwayo nezikhethwa ngabantu abaninzi. Ekubunjweni kwe-jackfruit yaseThai iqulethe iivithamini, isinyithi, i-magnesium, … Ukuzisa ezininzi iziphumo ezinkulu kwimpilo yabantu. Akuphelelanga apho, lo mthi ukwalula kakhulu ukuwukhulisa, ukuwunyamekela, kunye nokunika isiqhamo ngokukhawuleza, uzisa inzuzo enkulu yezoqoqosho kumafama.
Umthi we-jackfruit waseThai uyakhula kwaye ukhule kakuhle, iziqhamo ziveliswa unyaka wonke. I-Jackfruit pulp ingqindilili kakhulu, inombala omthubi omnyama kwaye inefiber encinci. Xa usitya, uya kuziva incasa emnandi, enevumba elimnandi kunye nencasa. Umthi osisigxina we-Thai jackfruit unokuvelisa ukuya kutsho kwi-150 yeziqhamo.
Umthi we-jackfruit oyimazi unobude obuphakathi kwe-10 ukuya kwi-15m, eminye imithi ifikelela kwi-20m ubude. Lomthi uvelisa isiqhamo emva kweminyaka emi-2 ukuya kwemi-5 yokutyala, imazi yejackfruit imile okweqanda, malunga ne-10 ukuya kwi-20cm ububanzi, 20 ukuya kwi-50cm ubude. Incasa ye-jackfruit yabasetyhini yahluke kakhulu kwezinye iintlobo zejackfruit, kunye nentwana encinci ye-durian exutywe kuyo.
Umthi wejackfruit wasendle, owaziwa ngokuba ngumthi wejackfruit, ukhuliswa okanye ukhule ngokwendalo emahlathini nasezindulini. Iziqhamo zasendle zejackfruit zincinci kakhulu, zinobunzima obungange 500 grams, kwaye zinamacandelo ambalwa. Ukongeza, esi siqhamo sikwanencasa eswiti kunye nemuncu edityaniswe nevumba elimnandi kakhulu.
Umthi wejackfruit oyindoda
I-Male jackfruit, nekwaziwa ngokuba yi-wind jackfruit, olu hlobo lwejackfruit ludla ngokuphuma phambi kwemazi, ngoko ke xa imazi entsha ikhula, i-jackfruit eyindoda iye yawa. Isiqu solu didi lwejackfruit sincinci kakhulu, sinezikhonkwane ezimbalwa. Ukongeza, lo mthi awunayo i-protrusion ejikeleze isiseko sesebe.
Umthi wejackfruit obomvu
Ijackfruit enomzimba obomvu isuka kumhlaba weTempile yeGolide kwaye isandula ukutyalwa kwilizwe lethu kule minyaka idlulileyo. Esi sityalo kulula kakhulu ukukhula kunye nokunyamekela, ziqhelaniswe kakuhle neemeko zendalo kwilizwe lethu, ngoko zikhula ngokukhawuleza. Inyama ebomvu yejackfruit inombala omhle kakhulu obomvu, isiqhamo sityebile, siqinile, kwaye sinencasa eswiti.
Lo mthi uyakhawuleza kakhulu ukuvelisa iziqhamo, emva kweminyaka eyi-1 enesiqingatha kuphela yokutyala, unokuvuna ijackfruit yokuqala ebomvu. Ukongeza, umthi wejackfruit unika isiqhamo esinemveliso kakhulu kwaye esemgangathweni, ubunzima besiqhamo esinye bunokufikelela kuma-20kg.
Super early Thai jackfruit
Umthi wejackfruit waseThai ukhethwa ngamafama amaninzi njengomhlanganisela. Isizathu kukuba lomthi uvelisa iziqhamo emva konyaka omnye wokutyala kwaye isivuno singafikelela kwi 120 yeziqhamo / umthi omnye emva kweminyaka emi-2 yokutyala. Incasa yejackfruit nganye yamandulo yaseThai imnandi kakhulu kwaye inencasa njengobusi. Esi sityalo sithetha nje ngowona mthombo wengeniso yamafama amaninzi.
Umboko wejackfruit unomthi, unomndilili wobude obumalunga ne-5 ukuya kwi-9m. Iingcambu zomthi wejackfruit zomelele, zingena nzulu emhlabeni ukunceda umthi ukuba ume uqinile ngokuchasene nezaqhwithi kunye nezikhukhula. I-turmeric jackfruit inombala omthubi otsala iliso, ubumnandi bunesibindi kwaye xa utyiwe, unokuva ukukrala. I-Turmeric jackfruit ivelisa iziqhamo eziqaqambileyo zesitrasi ezimthubi. Xa uyitya, uya kuva ubumnandi obubukhali kwaye inkruneke kakhulu ngelixa ikhupha ivumba elahlukileyo.
Ungatyala njani umthi wejackfruit ongalunganga
Indlela yokukhulisa ijackfruit ngezithole
Kufuneka ulungiselele izithole ezisempilweni, ezingenazinambuzane. Emva koko khetha umhlaba otyebileyo, nogalelwe amanzi ukuze ulime. Yomba umngxuma olingana nembiza uze ususe iplastiki egquma imbiza. Faka isityalo sembiza emngxunyeni uze uwugcwalise ngomhlaba obhityileyo. Emva koko, ufefe inani elincinci lamanzi emhlabeni. Abalimi banokusebenzisa le ndlela yokutyala kumthi we-Thai jackfruit.
Ukutyala imithi yejackfruit ezimbizeni
Ungasebenzisa indlela yokuntshula, ukukhula kunye nezithole, ukudibanisa okanye ukusika amasebe ukuze kukhule i-jackfruit ezimbizeni. Ukuba usebenzisa indlela ye-nursery, abalimi kufuneka balandele la manyathelo:
Inyathelo 1: Okokuqala, kufuneka ulungiselele imbewu yomama wejackfruit ukuze ubesempilweni, ukhule kwaye ukhule kakuhle.
Inyathelo lesi-2: Lfuka iimbewu zejackfruit ngamanzi ashushu malunga nosuku olunye ukususa yonke iplastiki encangathi kwimbewu. Ngexesha elifanayo lungisa umhlaba wokutyala iimbiza.
Inyathelo lesi-3: Yomba umngxuma ubeke imbewu yejackfruit malunga ne-3cm ubunzulu emhlabeni, kufuneka ibekwe embindini wembiza.
Inyathelo lesi-4: Abalimi bankcenkceshela imbewu yonke imihla. Qaphela ukuba akufanele unkcenkceshele kakhulu, kuya kukhokelela kumanzi kwaye imbewu ayiyi kukhula.
Ubuchwephesha bokufakelwa komthi wejackfruit
Indlela yokuxhunyelelwa kwimithi yejackfruit yenye yezinto ezibalulekileyo ezimisela isivuno kunye nomgangatho wesiqhamo. Abalimi banokusebenzisa i-grafting nangaliphi na ixesha lonyaka. Nangona kunjalo, kuyacetyiswa ukuba udibanise amasebe omthi we-jackfruit ehlotyeni ukuze umthi ungafihli incindi eninzi, amathuba okuba neziqhamo ziya kuba phezulu kakhulu.
Isizathu sokuba abantu abaninzi bakhethe indlela yokuxhunyelelwa kukuba umthi uya kunika isiqhamo ngokukhawuleza, ukukhula kunye nokuphuhliswa komthi kuya kuba namandla. Kwangaxeshanye, ngale ndlela, imithi yejackfruit iphinda ikhulise ukuxhathisa kwayo kwizinambuzane ezitshabalalisayo nezifo ize izuze iingenelo kumthi ongumama. Obu buchule bunokusetyenziswa kwiindlela zokukhulisa ijackfruit yaseThai.
Okokuqala, abalimi kufuneka balungiselele izixhobo zokufakelwa ezifana: iingxowa zeplastiki, iingcambu, iintambo zeplastiki kunye neemela. Kwiingcambu, abalimi kufuneka bakhethe i-rootstocks eneminyaka eyi-1 ubudala okanye ngaphezulu, kwaye ngokukodwa i-rootstocks engenazo izinambuzane, ezikwazi ukukhula nokuphuhlisa ngokukhawuleza.
Inqaku elibalulekileyo malunga nendlela yokuxhunyelelwa: Abalimi kufuneka bakhethe iintlobo ezihlonyelweyo zemithi yejackfruit yasendle okanye ekhula ngokwendalo. Ngenxa yokuba banamandla okuziqhelanisa nazo zonke iimeko zendalo, zikhula ngokukhawuleza, zomelele, zikwazi ukumelana nezinambuzane nezifo.
Ukudibanisa kwenziwa ngolu hlobo lulandelayo:
Inyathelo 1: Abalimi basebenzisa imela ukusika imigca emibini ethe nkqo ezantsi esiphunzini sengcambu enobude obumalunga ne-3 ukuya kwi-4cm, ububanzi obumalunga ne-2 ukuya kwi-3cm.
Inyathelo 2: Emva koko, qhubeka usika umgca othe tye odibanisa imigca emibini ethe nkqo ehambelanayo ukwenza ubume buka-U.
Inyathelo lesi-3: Kucetyiswa ukuba ukhethe i-U-root graft enempilo kunye nobukhulu obufanelekileyo kwi-rootstock yokusika. Okulandelayo, umlimi kufuneka ahlule ihlumelo kwaye acoce ubumdaka kunye nemicu yomthi ekwigrafti aze ayikhame iqine.
Inyathelo lesi-4: Okokugqibela, umlimi usebenzisa intsontelo yenayiloni ukusonga indawo yokufakelwa. Emva kwesiqingatha senyanga, susa intambo yenayiloni ukujonga ukuba i-graft isentsha okanye hayi.
Indlela yokunyamekela umthi wejackfruit
Ukunyamekela imithi ye-jackfruit ngaphandle kwezifo
Indlela yokunkcenkceshela: Ngokukhawuleza emva kokutyala, abalimi bankcenkceshela kube kanye ngeentsuku ezi-2. Emva kweenyanga ezi-2 ukuya kwezi-3, kuyacetyiswa ukuba unkcenkceshele kanye ngeveki. Ukusukela kunyaka we-2 ukuya phambili, abalimi bankcenkceshela kuphela imithi ye-jackfruit ngexesha lonyaka elomileyo okanye emva kokuchumisa. Ungagquma iingcambu ngeendiza, amakhatshu erayisi, ifula ukugcina ukufuma kwezityalo.
Imowudi yesichumiso: Kufuneka kufakwe isichumiso se-NPK, isichumiso se-nitrogen eluhlaza kwizityalo ngokwenkqubo yolawulo kanye ngenyanga kwiminyaka yokuqala. Ukususela kunyaka we-2 ukuya phambili, abalimi kufuneka balungelelanise isixa esifanelekileyo sesichumisi kwaye bahlule ngamaxesha ama-3 / ngonyaka. Unokufaka olu khathalelo kukhathalelo lwe-Thai jackfruit tree.
Ukuhlakula: Abalimi kufuneka bahlambulule rhoqo izityalo malunga namaxesha ama-5 / ngonyaka kwiminyaka yokuqala emva kokutyala. Ukuba sishiya ingca eninzi kakhulu, iyakufunxa ukukhanya kunye nezondlo zomhlaba, yenze isityalo sikhule kwaye sikhule ngokucothayo. Ukongeza, abalimi kufuneka baqaphele ukuba imichiza yokutshabalalisa ukhula eninzi kufuneka ingasetyenziswa ukuchaphazela izityalo.
Amasebe okuthena: Sika amasebe anesifo ukunqanda ukwanda kwamanye amasebe. Kwangaxeshanye, abalimi kufuneka banqumle amasebe amadala, angeyomfuneko ukwenza umoya wokungena emthini.
Ukukhathalela amagqabi ejackfruit atyheli
Indlela yokunyamekela izifo kwimithi ye-jackfruit enamagqabi aphuzi? Xa oku kunjalo, abalimi kufuneka bafumane unobangela ukuze babe nolona nyango lufanelekileyo. Esinye sezizathu ezingundoqo kukuba iingcambu zonakele, nto leyo ekhokelela ekubeni singakwazi ukufunxa izondlo ezifunekayo kwisityalo. Abalimi banokusebenzisa izithako ezisebenzayo i-Iprodione okanye i-Dimethorph emanzini okanye kwizityalo zokutshiza.
Ukunyamekela imithi yejackfruit engavelisi siqhamo
Abalimi banokusebenzisa indlela yokusika amanzi kwimithi yejackfruit engavelisi siqhamo. Amanzi kufuneka anqunyulwe isiqingatha senyanga de amahlumela amancinci aqale ukubola kancinci, amagqabi agobile kwaye amadala. Okulandelayo, umlimi kufuneka embe umsele womthi aze emva koko achumise, ankcenkceshele aze anyamekele njengesiqhelo.
Uwubetha njani umthi wejackfruit
Okokuqala, ngokusekelwe kwiminyaka yomthi ukwazi ukuba ubunzulu kangakanani ukumba. Ngokuqhelekileyo, kuyacetyiswa ukuba umbe malunga ne-1m ukuya kwi-1m2 ubunzulu uze unqumle onke amasebe amadala, amabi ukulinganisa umthi. Emva koko, shiya umthi phantsi kwaye unkcenkceshele isiqu (musa ukunkcenkceshela ingcambu kakhulu) kwiintsuku zokuqala emva kokubetha umthi we-jackfruit. Kwangaxeshanye, abalimi kufuneka bagcine imbiza ingaqhekeki kwaye nesiqu singakrwelwa ngexesha lokuhamba. Le yenye yeendlela ezibaluleke kakhulu zokukha i-jackfruit ekufuneka abalimi banikele ingqalelo kuyo.
Ixabiso lezithole zejackfruit
Okwangoku, kwiimarike kukho iintlobo ezininzi ezahlukeneyo ze-jackfruit abalimi abanokukhetha kuzo. Ungazifumana nakuwuphi na umfuyi kwilizwe liphela. Ixabiso lomthi wejackfruit lidla ngokusukela: 80,000 – 100,000 VND
Ukongeza, kuxhomekeke kwiindidi ezahlukeneyo zejackfruit, ixabiso liyahluka. Enye yeendidi zejackfruit ezithandwa ngabantu abaninzi kwaye bakhethe ukuzikhulisa ngumthi wejackfruit waseThai. Isizathu sokuba lo mthi ukhule lula, kulula ukuwukhathalela, unika isivuno esiphezulu kunye neziqhamo ezisemgangathweni. Ukongeza, incasa ye-Thai jackfruit imnandi kakhulu, lukhetho lokuqala lwabathengi.
Ixabiso lezithole zaseThai jackfruit lisukela: 50,000 – 200,000 VND ngokuxhomekeke kubungakanani bomthi.
Umthi weJackfruit ngomnye wemithi eqhelekileyo kumntu wonke. Ngencasa emnandi kunye nomxholo wesondlo ophakamileyo, ijackfruit isoloko iyinto ethengiswa kakhulu kwimarike. Ukongeza, esi sityalo sikwanayo inzuzo yokuba kulula ukukhula kunye nokunyamekela, abalimi banokukhula naphi na. Nceda ubhekisele kwiimpawu, iindlela zokutyala, ubuchule bokuxhunyelelwa, kunye nokukhathalela ijackfruit engalunganga ukufumana izitiya zejackfruit ezineziqhamo!
Cây mít giống các loại- Hướng dẫn cách trồng và chăm sóc mít giống | Hatgiongtihon.net
Rực Rỡ Mùa Hoa Mimosa Đà Lạt | Hatgiongtihon.net